၆ Window Box များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအပင် - ဥယျာဉ်အကြံပေးချက်များ
သင့်ရဲ့ Window Boxes အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအပင် ၆
သို့သော် ၀ င်းဒိုးသေတ္တာများကိုမည်သည့်အရာဖြင့်စိုက်ရမည်ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အတွက်အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ပြတင်းပေါက်သေတ္တာများသည်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်သည်။
Window Boxes အတွက် Fantastic Herbs သုံးမျိုး
သင်ချက်ပြုတ်လိုလျှင်လတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသင်နှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်လိမ့်မည်။ လတ်ဆတ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း? သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြီးပွားပါ။ မီးဖိုချောင်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရှိပြတင်းပေါက်သေတ္တာထဲ၌လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်ထားခြင်းထက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားရန်အဘယ်ပိုကောင်းသည့်နည်းလမ်းရှိသနည်း။ သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းပါဝင်ပစ္စည်းများသည်လက်လှမ်းမမီနိုင်တော့ပါ။
Basil သည်ဂန္တ ၀ င်ပြတင်းပေါက်သေတ္တာပျိုးပင်ဖြစ်သည်
Basil သည်ကြီးထွားရန်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သောချက်ပြုတ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်နွေ ဦး ရာသီမကုန်မီနောက်ဆုံးနှင်းခဲကျပြီးနောက်သင်အစေ့များကိုပြတင်းပေါက်သေတ္တာထဲသို့တိုက်ရိုက်စိုက်နိုင်သည်။ သင်၏ပင်စိမ်းအပင်များပေါ်တွင်ခေါင်းတစ်လုံးစတင်ရရှိရန်သင်သည်အပင်များကိုအပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၌စတင်နိုင်သည်။ ဤအပင်များစွာကဲ့သို့ပင်သင်စိုစွတ်။ ကောင်းစွာညှစ်နေသောမြေဆီလွှာလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အရွက်များတိုးပွားစေရန်နှင့်အရွက်၏အရသာကိုထိန်းသိမ်းရန်ပေါ်လာသည့်အခါပန်းများကိုချုံ့ပါ။
Peppermint ဟာချက်ပြုတ်ရုံထက်မကအသုံးဝင်ပါတယ်။ လူအများသိသည့်အတိုင်းဥယျာဉ်ပိုးမွှားများသည်များသောအားဖြင့်ငရုတ်သီးအနံ့ကိုမကြိုက်ကြပါ။ သင့်ရဲ့သေတ္တာများထဲတွင် peppermint ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မီးဖိုချောင်တွင်ကောင်းမွန်သောဆေးပင်တစ်မျိုးရနိုင်သည် နှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပိုးမွှားဝေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Peppermint (နှင့်ဆီဖြစ်သည်) ကိုလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်အခြားအိမ်တွင်းကုထုံးများတွင်လည်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အစာခြေခြင်းသို့မဟုတ်အပန်းဖြေခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအချိုပွဲများတွင်လည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီစက်ရုံအပေါ်အကျိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ် ဒါပေါ့ များစွာသောအဆင့်များနှင့်သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက် box ထဲမှာရှင်သန်သင့်ပါတယ်။
ဒါဟာ (ငါ Pun နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုထွက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်) စမုန်ဖြူစိုက်ပျိုးရန်အလွန်ကြီးစွာသောစမုန်ဖြူပါပဲ။
စမုန်ဖြူသည် peppermint နှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းတွင်အသုံးဝင်သော application များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်အလားတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိပြီးအခြားမီးဖိုချောင်ဆေးပင်နှင့်လည်းရာသီဥတုကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အပိုဆောင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်မွှေးကြိုင်သောအရသာကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်၎င်းကိုဟင်းချိုသို့မဟုတ်စတော့များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်သေတ္တာထဲမှာစမုန်ဖြူကြီးလွန်းမပေါက်ပါဘူး ၎င်းသည်မြေပြင်အဖုံးနှင့်တူသည်၊ ၎င်းသည်ပြတင်းပေါက်သေတ္တာတစ်ခုကိုဖြည့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
Window Boxes အတွက်အလှဆင်ထားသောအပင်သုံးမျိုး
သင်တစ် ဦး ပျိုးပင်ဥယျာဉ်ကိုမလိုချင်, သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး ရှိသည်နှင့်သင်အပိုဆောင်းပြတင်းပေါက်သေတ္တာများထည့်သွင်းဖို့ရှာကြသည်လျှင်, ဤလာမည့်အကြံပြုချက်များကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ တန်ဆာဆင်ပြတင်းပေါက်သေတ္တာများသည်သင့်အိမ်အားမျက်နှာသုတ်လိမ်းရန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒီအပင်များရဲ့အမြင်အာရုံအလှအပကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ရန်သင့်အိမ်အပြင်ဘက်မှမြင်နိုင်သောပြတင်းပေါက်များကိုရွေးချယ်ပါ။
'Blazin 'နှင်းဆီ' Iresine
ဤစက်ရုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပြတင်းပေါက်ရှိသေတ္တာထဲသို့မယုံနိုင်လောက်သောအရောင်အချို့ကိုထည့်သွင်းပေးသည်။ ၎င်း၏တောက်ပသောအနီရောင်အရောင်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောအရွက်များသည်သင်၏ဥယျာဉ်သေးသေးလေးတွင်စိမ်းလန်းစိုပြေစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစက်ရုံသည်ပြတင်းပေါက်အကွက်၏အဆုံးသတ်အဖုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ခံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နွေ ဦး နှင့်နွေရာသီတွင်ပွင့်လန်းပြီးသင့်အိမ်၏ဘေးထွက်သို့မဟုတ်ရှေ့တွင်အရောင်များကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာအတော်လေးကြီးထွားလာ, ဒါကြောင့်ကြီးထွားမှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်ပြတင်းပေါက် box ထဲမှာစိုက်။
အဖြူရောင် licorice စက်ရုံ
iresine သည်ပြတင်းပေါက်ရှိသေတ္တာအတွင်းသို့တောက်ပ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအနီရောင်ကိုယူဆောင်လာစဉ်အဖြူရောင် licorice သည် ပို၍ သိမ်မွေ့သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစက်ရုံတွင်သင်၏ပြတင်းပေါက်သေတ္တာရှေ့တွင်ကြီးထွားသောတောက်ပသောငွေရောင်ရှိသောအသေး၊ အရွက်အရွက်များရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၏ရှေ့နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအခြေခံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်အပင်များမှထင်ရှားပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ကွက်လပ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Angelface အပြာရောင် Angelonia Hybrid
Narrowleaf Angelonia သည်ပြူတင်းပေါက်များတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
Angelonia သည်သင့် window window တွင်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့် iresine နှင့်ဆင်တူသည့်အရောင်များပိုမိုထည့်ရန်ကူညီသည်။ ဒါဟာတောက်ပသောခရမ်းရောင်အရောင်ရှိပြီးသောအရပ်ရှည်ရှည်ကျဉ်းမြောင်းသောစက်ရုံ။ ဒီအရောင်တောက်တောက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္ofာန်၏ဤဖြည့်စွက်ခြင်းသည်သင့်ဝင်းဒိုးအကွက်ရှိမတူညီသောအပင်များကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်။ ကျန်အပင်များအပေါ်တွင်ပွတ်တိုက်နေသည့်တောက်ပသောခရမ်းရောင်ပွင့်များသည်ပြီးပြည့်စုံသောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။ အန်ဂျလိုနီးယားသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးပြီးခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများမှရှင်သန်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ရနံ့သည်သင်၏ပြည့်ဝစုံလင်သော ၀ င်းဒိုးသေတ္တာကိုရှင်သန်စေနိုင်သည့်တ်မှုန်ကူးသူများကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
သင်၏ window box အတွက်ရွေးချယ်စရာခြောက်ခုသည်သင်၏ window box adventure ၏အစမျှသာဖြစ်သည်။ သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာသည်ရှာဖွေပါ။ သင်ချက်ပြုတ်လိုလျှင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပြည့်နေသည့်မီးဖိုချောင်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရှိပြတင်းပေါက်သေတ္တာတစ်ခုသည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ လှပပြီးရောင်စုံသောအပင်များပါ ၀ င်သည့်ပြတင်းပေါက်သေတ္တာသည်သင်၏အိမ်အပြင်ဘက်ကိုလှပအောင်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခုရွေး (သို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပါ) နှင့်သင်၏ box ကိုစတင်ပါ!
ကွန်တိန်နာဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ အိမ်နောက်ဖေးအရာအားလုံး ။
ဥယျာဉ်တော်၌ aphids ဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့မည်ပုံ